Dhageyso: Shacabka Cadaado oo soo dhaweeyey Shirka Jabuuti – Radio Muqdisho
Bulshada ku nool magaalada Cadaado ee Xauunta ku meel gaarka ee Galmudug ayaa ka aragti dhiibtay shirka Galmudug iyo ahlu sunna uga socda Dalka Jabuuti ee lagu dhamaynaayo mugdiga Siyaasadeed ee u dhaxeeya labada dhinac.
Dadkaan qaarkood oo la hadlay Radio muqdisho Codka Jamhuuriyadda Soomaliya ayaa soo dhaweeyay shirka jabuuti kuna tilmaamay bilowga horumarka Galmudug oo aay Guul tahay in aay is hor fariistaan Galmudug iyo Ahlusuna iyagoo fiirinaya Shacabka Gobolada dhexe.
waxaa aay ugu baqeyn madaxda Galmudug iyo Ahlusuna in ay u dhimriyaan shacbka islmarkana ay sameyaan isku tanaasul si loo midooye Bulshada Mudug iyo Galguduud.
Madaxda Galmudug iyo Ahlusuna Wal jameeca ayaa Dalka Jabuuti u tagay sidii xal waara looga gaari lahaa Arrimaha la xariira Siyaasadda Gobolada dhexe iyo heli taanka Maamul ay ku midaysan yihiin Shacabku.
Halkaan hoose ka dhageyo Codadka Bulshada:
Dagaalo dad ay ku dhinteen oo wali ka socda dalka Yamen